Ahoana ny fomba hamoronana hitsin-dàlana amin'ny App: Mpamorona hitsin-dàlana | Androidsis
ny hitsin-dàlana amin'ny hetsika amin'ireo rindranasa na fampiharana mitovy amin'izany dia mety ho mora ampiasaina hamonjeny antsika tsy hisitrika eo anelanelan'ny sehatr'asa na hiditra amin'ny WhatsApp handefasana hafatra mivantana amin'ny fifandraisana iray aza. Manana an'io safidy io amin'ny Android isika ary rehefa hainay ny fomba fampiasana azy tsara dia afaka manana fidirana maro ao amin'ny birao isika mba hanafainganana ireo asa mahazatra indrindra izay matetika ataontsika amin'ny findaintsika isan'andro. Saingy hatrany, noho io vondrom-piarahamonina lehibe ananan'ireo mpamorona antoko fahatelo ananantsika amin'ny Android io dia afaka misafidy rindranasa izay manatsara ireo safidy ireo izahay.
Izany no mitranga amin'ny App Shortcut Maker na App: Shortcut Creator izay raha fintinina dia mitovy, fa miaraka safidy mandroso sasany ary inona no fanamorana ny fampiasana manana hitsin-dàlana mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika na bebe kokoa amin'ilay fanaingoana tadiavinay ka manana endrika toy izany ilay kisary. App Shortcut Maker dia fampiharana iray izay avy amin'ny mpamorona miorina amin'ny forum XDA ary avy eo dia mandefa ny vaovao rehetra amin'ny endrika fanavaozana izay ho avy tsy ho ela amin'ity fampiharana mahafinaritra sy mahasoa ity. Andao hofantarina ny fidirana sy ny faran'ny App: Mpamorona hitsin-dàlana.
1 Mamorona hitsin-dalana haingana sy mahazatra
2 Mandrosoa ny fampiharana
Mamorona hitsin-dalana haingana sy mahazatra
App: Shortcut Creator dia misy maimaim-poana ao amin'ny Play Store, fa manana kinova premium miaraka amin'ny fiasa fanampiny. Raha ny voalaza, raha apetrakao izao dia afaka miditra amin'ireo safidy premium ireo ianao maimaim-poana noho ny fisondrotana manokana mandritra ny andro maromaro.
Ity fampiharana ity dia mamorona hitsin-dàlana fotsiny amin'ny fampiharana sy hetsika amin'ny telefaonao. Io dia ahafahanao mamorona ireo fidirana ireo amin'ny safidy tsara tsy manam-paharoa toa ny endrika manokana amin'ny sary masina ho an'ny Apple, Ace na koa ny fo. tolotra fanohanana fonosana kisary ho an'i Nova, Apex, ADW, Aviate, Go ary ny maro hafa. Misafidy fonosana amin'ireo kisary ianao rehefa mamorona hitsin-dàlana ary ho hitanao eo izany.
Ianao koa dia manana safidy afaka mamorona hitsin-dàlana amin'ny ampiasao ireo sary anananao ao amin'ny galeriana. Manolotra safidy hikarohana fampiharana handefasana azy ireo mivantana ary manana safidy hamoronana fidirana amin'ny hetsika rehetra. Anisan'izany ireo an'ny fampiharana, izay midika, ohatra, fa raha toa ny app Clock izay tonga amin'ny alàlan'ny default dia tsy mamela ny hanampy hitsin-dàlana ny pejy fanairana amin'ny alàlan'ny default, rehefa mampiasa ny Shortcut Maker App ianao dia afaka manampy iray amin'ny birao tsy misy misy olana.
Mandrosoa ny fampiharana
Rehefa mandefa azy voalohany isika dia ho eo alohan'ny mpitari-dàlana hampiasaina ary ho tsapantsika fa izany tokoa adika amin'ny Espaniôla; zavatra ankasitrahana. Avy amin'ny efijery lehibe dia manana takelaka telo isika: rindranasa, hetsika rehetra ary hitsin-dàlana na hitsin-dàlana. Eo an-tampony dia baraovana misy ny safidy hikarohana fampiharana na hetsika ary ny bokotra misy tsipika marindrano telo ahafahantsika miditra amin'ny tontonana fitetezana ny sisiny. Famolavolana fitaovana feno.
Avy any isika dia afaka miditra amin'ireo sokajy na habaka manan-danja indrindra amin'ny fampiharana toa ny trano, ny tiana, ny tantara ary ny fikirana. Ny hitsin-dalana rehetra izay noforoninay dia azonay atao marika azy ireo ho tianao ary hiseho eo amin'ny tantara izy ireo mba ho afaka mamerina azy ireo isaky ny tiantsika.
Tsindrio ny iray amin'ireo fampiharana ary miseho ny efijery lehibe hanamboarana ny hitsin-dàlana. Eto isika dia afaka manova ny anarana, misafidy ny kisary fonosana kisary (misy maimaim-poana), mamorona sary masina avy amina endrika iray, manaova kisary galerie, sokafy ny pejy fampiharana ao amin'ny Play Store na sokafy ny fampiharana. Eo amin'ny ankavanana ambony dia azontsika atao ny manisy bookmark ny fidirana. Azontsika atao ny misafidy ny endrika ary avy eo ny lokony izay ahitsy eo amin'ny efijery lehibe ao amin'ny topy mason-tsary. Vantany vao vita ny kisary na ny hitsin-dàlana, dia azontsika atao ny mamindra azy amin'ny birao miaraka amin'ny bokotra hita eo ankavanan'ny farany.
App: Mpamorona hitsin-dàlana dia a fampiharana mandroso tsara ary izany dia miaraka amina lahasa lehibe. Raha mitady zavatra mitovy amin'izany ianao, aza mangataka andro amin'ny fisintomana azy, satria afaka misafidy ireo fiasa premium rehetra vitanao ianao toy ny famoronana sary masina avy amin'ny sary, ny fonosana ikambana maimaimpoana roa voalohany sy ireo endrika maimaim-poana 5 voafantina.
Hitsin-tanana tsotra - Mamorona hitsin-dalana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mamorona hitsin-dàlana haingana sy mora amin'ny App Shortcut Maker
Ny OnePlus 3 dia tsy afaka mampiasa afa-tsy ny «Dash Charge» haingana miaraka amina tariby sy adaptatera tafiditra ao